မြန်မာသက္ကရာဇ် ခုအတွက် တစ်နှစ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကြီး – Thadinpaundchoke
April 4, 2020 April 4, 2020 မာနမင်းသားLeaveaComment on မြန်မာသက္ကရာဇ် ခုအတွက် တစ်နှစ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကြီး
မဟာသင်္ကြန် ကျချိန် – ၁၃၈၁ ခု ၊ နှောင်းတန်းခူလပြည့်ကျော်(၆)ရက်
၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ (၁၃)ရက် ၊ တနင်္လာနေ့ ၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ည (၁၁)နာရီ (၃၄) မိနစ် (၁၈) စက္ကန့်။
မဟာသင်္ကြန်အကြတ်နေ့ – နှောင်းတခူးလပြည့်ကျော် (၇) ရက်၂၀၂၀ခုနစ် ၊ ဧပြီလ(၁၄)ရက် ၊ အင်္ဂါ နေ့နှင့် နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော် (၈) ရက် ၊ ခရစ်နှစ်၂၀၂၀ခုနှစ်ဧပြီလ (၁၅) ရက် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
( မဟာသင်္ကြန်အကြတ်နှစ်ရက်ဖြစ်သည် )
မဟာသင်္ကြန်အတက်ချိန် – ၁၃၈၁ ခု ၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် (၉) ရက်
၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ (၁၆) ရက် ၊ ကြာသပတေးနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်စက် (၃) နာရီ (၃၉) မိနစ် (ဝ)စက္ကန့်။
( ဝါငယ်ထပ်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးသားသမီးများ အတာစားသည်။)
ပုပ္ပါးစောရဟန်းမင်းကို အကြောင်းပြုပြီးရေးထိုးသော မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ ခုနှစ်
သခင်ခရစ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရေးထိုးသော ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့အတွင်း
ငွေ၊ခြံ၊ကားကျောက်၊ ကျောက်မျက်၊ကုန်သည်လေး၊ကွန်ပြူတာ၊ကွမ်းသီးကွမ်းယာပစ္စည်း၊ကုန်ခြောက်၊ကုန်စုံဆိုင် ၊ ကြက်ဥ ၊ ၊ ကြက်သား ၊ ကြက်မွေးမြူရေး၊ငါးပိ၊ငါးခြာက်၊ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ …။
ပညာကိုအသုံးချရသောအလုပ်၊ပညာရေးအလုပ်၊ဘာသာရေးအလုပ် ၊ ဆရာအလုပ်၊ မြေ၊ ဖုန်း၊ မုန့်၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ ဖယောင်း၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ပန်းထိမ် လုပ်ငန်းများ ….။
အိုးအိမ်၊ အဆောက်အဦး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေ၊ အိမ်ခြံ၊ မြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများသည် အထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်လတ္တံ့။
အလှအပ၊ အနုပညာ၊ လက်မှုပညာ၊ ရွှေ၊ ရတနာ၊ ရေနံ၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ရေသန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ အအေး၊ အဖျော်ယမကာ၊ ဘီယာ၊ ယုံစုံလုပ်ငန်းများ နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါ ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးမှ အောင်မြင်လတ္တံ့။
အထည်အလိပ်၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ နာရီ၊ ဦးထုပ်၊ လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြား၊ မီး၊ လျှပ်စစ်၊ အပူ၊ ဓါတ်ငွေ့၊ ဒီဇယ်၊ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ နို့ဆီ၊ ဓါတ်ပုံ၊ ထီလုပ်ငန်း၊ ထုံးလုပ်ငန်း စသည့်လုပ်ငန်းများသည် အလယ်အလတ် ပုံမှန်တန်းတွင်သာရှိနေလတ္တံ့။
ဆန်၊ စပါး၊ ဆီ၊ ဆေး၊ ဆား၊ စိန်၊ စက်မှုလက်မှု၊ စားသောက်ကုန်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်၊ စက်ချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စာပေ၊ စာရေးကိရိယာ၊ စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများ
ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဟော်တယ်လုပ်ငန်း၊ ရေကြောင်းခရီးနှင့်ပက်သက်သောလုပ်ငန်း၊ ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောသားနှင့်ပက်သက်သောလုပ်ငန်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်သည်ကြီးအလုပ်၊ ပွဲစားအလုပ်၊ အသံကိုအသုံးချရသောအလုပ်၊ စကားပြောရသောအလုပ်၊ လှုပ်ရှားရသောအလုပ်၊ သစ်၊ သံ၊ သွပ်၊ သစ်သီး၊ သီးနှံ လုပ်ငန်းများသည် ထစ်ငေါ့၊ လွဲချော်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ရခြင်းများဖြစ်တတ်သည့်အတွက် အစစအရာရာသတိထားပြီး လုပ်ဆောင်သင့်အံ့။
အကျွန်ုပ်၏ကောင်းသောဟောချက်များ သွေးထွက်အောင်မှန်ကန်၍၊ မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။
၁၃၈၁ နှစ်ဟောင်းကုန်၍ ၁၃၈၂ နှစ်သစ်ကိုကြိုလင့်သော ရွက်ဟောင်းတွေကြွေ ရွက်သစ်တွေဝေနေသော နွေရာသီ
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအခါသမယ မဟာသင်္ကြန်ကာလ၏ စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းလှသော ဧပြီလ၏နေ့ရက်များ
မွနျမာသက်ကရာဇျ ခုအတှကျ တဈနှဈစာ ဗဒေငျဟောစာတမျးကွီး
မဟာသင်ျကွနျ ကခြိနျ – ၁၃၈၁ ခု ၊ နှောငျးတနျးခူလပွညျ့ကြျော(၆)ရကျ
၂၀၂၀ခုနှဈ ၊ ဧပွီလ (၁၃)ရကျ ၊ တနင်ျလာနေ့ ၊ မွနျမာစံတျောခြိနျ ည (၁၁)နာရီ (၃၄) မိနဈ (၁၈) စက်ကနျ့။
မဟာသင်ျကွနျအကွတျနေ့ – နှောငျးတခူးလပွညျ့ကြျော (၇) ရကျ၂၀၂၀ခုနဈ ၊ ဧပွီလ(၁၄)ရကျ ၊ အင်ျဂါ နနှေ့ငျ့ နှောငျးတနျခူးလပွညျ့ကြျော (၈) ရကျ ၊ ခရဈနှဈ၂၀၂၀ခုနှဈဧပွီလ (၁၅) ရကျ ၊ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့
( မဟာသင်ျကွနျအကွတျနှဈရကျဖွဈသညျ )
မဟာသင်ျကွနျအတကျခြိနျ – ၁၃၈၁ ခု ၊ တနျခူးလပွညျ့ကြျော (၉) ရကျ
၂၀၂၀ ခုနှဈ ၊ ဧပွီလ (၁၆) ရကျ ၊ ကွာသပတေးနေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျနံနကျစကျ (၃) နာရီ (၃၉) မိနဈ (ဝ)စက်ကနျ့။
( ဝါငယျထပျသောနှဈဖွဈသညျ။ ကွာသပတေးသားသမီးမြား အတာစားသညျ။)
ပုပ်ပါးစောရဟနျးမငျးကို အကွောငျးပွုပွီးရေးထိုးသော မွနျမာသက်ကရာဇျ ၁၃၈၂ ခုနှဈ
သခငျခရဈတျောကိုအကွောငျးပွုပွီးရေးထိုးသော ခရဈသက်ကရာဇျ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဧပွီလ ၁၇ ရကျနမှေ့ ၊ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပွီလ ၁၇ ရကျနအေ့တှငျး
ငှေ၊ခွံ၊ကားကြောကျ၊ ကြောကျမကျြ၊ကုနျသညျလေး၊ကှနျပွူတာ၊ကှမျးသီးကှမျးယာပစ်စညျး၊ကုနျခွောကျ၊ကုနျစုံဆိုငျ ၊ ကွကျဥ ၊ ၊ ကွကျသား ၊ ကွကျမှေးမွူရေး၊ငါးပိ၊ငါးခွာကျ၊ငါးမှေးမွူရေး လုပျငနျးမြား …။
ပညာကိုအသုံးခရြသောအလုပျ၊ပညာရေးအလုပျ၊ဘာသာရေးအလုပျ ၊ ဆရာအလုပျ၊ မွေ၊ ဖုနျး၊ မုနျ့၊ ပဲ၊ ပွောငျး၊ ဖယောငျး၊ ပနျးခြီ၊ ပနျးပု၊ ပနျးထိမျ လုပျငနျးမြား ….။
အိုးအိမျ၊ အဆောကျအဦး၊ ဆောကျလုပျရေး၊ အုတျ၊ သဲ၊ ကြောကျ၊ အိမျဆောကျပစ်စညျး၊ အိမျထောငျပရိဘောဂ၊ အုပျခြုပျရေး၊ ဥပဒေ၊ အိမျခွံ၊ မွအေကြိုးဆောငျလုပျငနျးမြားသညျ အထူးအကြိုးပေးအောငျမွငျလတ်တံ့။
အလှအပ၊ အနုပညာ၊ လကျမှုပညာ၊ ရှေ၊ ရတနာ၊ ရနေံ၊ ရလေုပျငနျး၊ ရသေနျ့၊ လကျဖကျရညျ၊ အအေး၊ အဖြျောယမကာ၊ ဘီယာ၊ ယုံစုံလုပျငနျးမြား နှဈကွိမျနှဈခါ ကွိုးစားအားထုတျပွီးမှ အောငျမွငျလတ်တံ့။
အထညျအလိပျ၊ ထီး၊ ဖိနပျ၊ နာရီ၊ ဦးထုပျ၊ လူမြိုးခွား၊ နိုငျငံခွား၊ မီး၊ လြှပျစဈ၊ အပူ၊ ဓါတျငှေ့၊ ဒီဇယျ၊ နှားနို့၊ ဒိနျခဉျြ၊ နို့ဆီ၊ ဓါတျပုံ၊ ထီလုပျငနျး၊ ထုံးလုပျငနျး စသညျ့လုပျငနျးမြားသညျ အလယျအလတျ ပုံမှနျတနျးတှငျသာရှိနလေတ်တံ့။
ဆနျ၊ စပါး၊ ဆီ၊ ဆေး၊ ဆား၊ စိနျ၊ စကျမှုလကျမှု၊ စားသောကျကုနျ၊ စားသောကျဆိုငျ၊ စတိုးဆိုငျ၊ စကျခြုပျ၊ စိုကျပြိုးရေး၊ စာပေ၊ စာရေးကိရိယာ၊ စပျတူရှယျယာ လုပျငနျးမြား
ခရီးသှားလုပျငနျး၊ ဟျောတယျလုပျငနျး၊ ရကွေောငျးခရီးနှငျ့ပကျသကျသောလုပျငနျး၊ ရထှေကျကုနျလုပျငနျး၊ သင်ျဘောသားနှငျ့ပကျသကျသောလုပျငနျး၊ သတ်တုတူးဖျောရေးလုပျငနျး၊ သယျယူပို့ဆောငျရေးလုပျငနျး၊ ကုနျသညျကွီးအလုပျ၊ ပှဲစားအလုပျ၊ အသံကိုအသုံးခရြသောအလုပျ၊ စကားပွောရသောအလုပျ၊ လှုပျရှားရသောအလုပျ၊ သဈ၊ သံ၊ သှပျ၊ သဈသီး၊ သီးနှံ လုပျငနျးမြားသညျ ထဈငေါ့၊ လှဲခြျောခွငျး၊ ထိခိုကျဆုံးရှုံးခွငျး၊ စိတျပူပနျရခွငျးမြားဖွဈတတျသညျ့အတှကျ အစစအရာရာသတိထားပွီး လုပျဆောငျသငျ့အံ့။
အကြှနျုပျ၏ကောငျးသောဟောခကျြမြား သှေးထှကျအောငျမှနျကနျ၍၊ မကောငျးသောဟောခကျြမြား တကျတကျစငျအောငျ လှဲမှားပါစသေတညျး။ …. ။
၁၃၈၁ နှဈဟောငျးကုနျ၍ ၁၃၈၂ နှဈသဈကိုကွိုလငျ့သော ရှကျဟောငျးတှကွှေေ ရှကျသဈတှဝေနေသေော နှရောသီ
မွနျမာနှဈသဈကူးအခါသမယ မဟာသင်ျကွနျကာလ၏ စိတျလှုပျရှား ရငျခုနျဖှယျကောငျးလှသော ဧပွီလ၏နရေ့ကျမြား
စီးပွား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးချဲ့သင့်။ လုပ်ငန်းစီးပွား လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွားမြင့်တက်လတ္တံ့။ ကံကောင်းအံ့။ လုပ်ငန်းသစ်များစတင်သင့်။
မင်းစိုးရာဇာကူညီမစခြင်း ၊ မင်းစိုးရာဇာများနှင့်ပက်သက်ရခြင်း ၊ အလုပ်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ရန်အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင်များပေါများပြီး ၎င်းတို့အပေါ် ကံအသာစီး အနိုင်ရရှိခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခြင်း၊သြဇာအာဏာထက်မြက်ခြင်း၊ အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ခြင်း ၊ သူများပြဿနာကြားဝင်ပါရတတ်ခြင်း ၊ မိတ်ဆွေရင်းလူရင်းများသစ္စာဖောက်ခြင်း ၊ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရခြင်း ၊ အခြွေအရံပေါများခြင်း ၊ မိမိကိုကြည်ညိုလေးစားချစ်ခင်သူများပေါများခြင်း၊အပျို၊လူပျိုများ လူလိမ်ခံရတတ်ခြင်း ၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများလက်ဆောင်ရခြင်း တို့ ကြုံရလတ္တံ့။
ငွေရေးကြေးရေး – လွဲချော်ပြီးမှ အောင်မြင်အံ့ ။ ရမလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးများ ကြန့်ကြာနေပြီး ၊ မရဘူးဟုထင်ရသောငွေကြေးများ ပြန်လည်ရရှိအံ့ ။ ကောင်းမလိုလိုနှင့်ညံ့ပြီး ညံ့မလိုလိုနှင့်ကောင်းအံ့။ ဝင်သလောက် ပြန်ထွက်နေအံ့ ။ မထင်မှတ်တာတွေ ဖြစ်လာအံ့ ။ အလှူအတန်းများလုပ်ရအံ့ ။
ငွေရေးကြေးရေး အထူးယတြာ – စီးနေသောရေထဲတွင် ငါး (၇)ကောင် မကြာခဏဘေးမဲ့လွှတ်ရင်း ဆုတောင်းပါ ။ ကိတ်မုန့်ကို ချိုင့်ထဲထည့်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မကြာခဏပို့ပေးပါ။ အိမ်ရှေ့ကို ရေ (၄)ခွက် မကြာခဏ ပက်ပေးပါ ။
ထီထိုးကံစမ်းရန် – အာလူးဟင်းနှင့် ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ပါ ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို အာလူးကြော်ဒါနလုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ( အ ဥ ရ ယ လ ၀ ) ပါသောထီဆိုင်တွင် (၁) နှင့် (၄) များများပါသော ထီလက်မှတ်ကိုရွေးထိုးပါ။ ပါးစပ်မှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရွတ်ပြီးထိုးပါ …။
အချစ်ရေး – ချစ်သူ၏ မာယာပရိယာယ်ကြားမှာ နစ်မျောသွားတတ်။ သတိပြုသင့်။ ကောင်းမလိုလိုနဲ့ ညံ့သွားတတ်။ ညံ့မလိုလိုနဲ့ ကောင်းသွားတတ်။ အသေးအဖွဲလေးကအစ ညှိုနှိုင်းရခက်နေတတ်။အချစ်ရေးကံကောင်းသည်ဟု ယူဆနိုင်သော်လည်း မိန်းမလည် ယောင်္ကျားရှုပ်များနှင့်တွေ့ရတတ်ခြင်းကို သတိပြုအံ့။ ချစ်သူ၏ ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်လိမ်ညာခြင်းကို ခံရတတ်။
အိမ်ထောင်ရေး – အမြင်တွေအယူအဆတွေ မကြာခဏကွဲလွဲအံ့။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းပြီး ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်မှုတွေ များနေအံ့။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမကဲ့သို့ခင်မင်ရသူများ ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများကြောင့် လင်နဲ့မယား အဆငမပြေဖြစ်တတ်။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးတွင် ကြာသပတေးသားသမီးများ ၊ နာမည်တွင် ပ ဖ ဘ ဗ မ ပါသောသူများ ၊ ပညာရေး ၊ ဆရာအလုပ် ၊ မြေ ၊ ဖုန်း ၊ မုန့် နှင့်ပက်သက်သူများ ဝင်ရှုပ်တတ်။
ပညာရေး – မိမိရည်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုအောင်မြင်လတ္တံ့။ဆရာကောင်း သမားကောင်းတွေ့ရအံ့။ပညာရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး အကူအညီကောင်း အဆက်အသွယ်ကောင်း အပံ့ပိုးကောင်းများပေါ်လာလတ္တံ့။ ပညာရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး မင်းစိုးရာဇာအကြီးအကဲ ၊ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူ ကူညီမစလတ္တံ့။
ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော ပေါင်မုန့်(၅)ချပ်၊ ပန်းအဝါ(၅)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ ပန်းအဖြူု(၂)ပွင့်ထည့်ပြီးရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – စနေနေ့ည …။ အိုးတစ်လုံးထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။ နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်ရောင်းကောင်းရန် – အမြန်ရောင်းထွက်ချင်တဲ့ ၊ ရောင်းကောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းများကို သစ်သီးတစ်လုံးနဲ့ ခေါက်ပေးပါ…။ ပါးစပ်ကနေပြီးတော့လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုတောင်းပါ …။ ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို ဉာဏ်ရှိသလိုလုပ်ပါ …။
ယတြာ။ ။ မည်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက် (၆)နာရီ(၅)မိနစ် တိတိတွင် ပန်းအဝါ (၅)ပွင့် ပေါင်မုန့်(၅)ချပ် ၊ သစ်သီး(၆)လုံး ၊ ကိတ်မုန့်(၂)ချပ် ၊ ၊ သောက်တော်ရေ (၅)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၅) တိုင် ၊ ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် မကြာခဏလှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။ (အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
စီးပှား အရှိနျအဟုနျဖွငျ့ တိုးခြဲ့သငျ့။ လုပျငနျးစီးပှား လကျရှိအခွအေနထေကျ မြားစှားမွငျ့တကျလတ်တံ့။ ကံကောငျးအံ့။ လုပျငနျးသဈမြားစတငျသငျ့။
မငျးစိုးရာဇာကူညီမစခွငျး ၊ မငျးစိုးရာဇာမြားနှငျ့ပကျသကျရခွငျး ၊ အလုပျတိုငျးနရောတိုငျးမှာ ရနျအတိုကျအခံ အပွိုငျအဆိုငျမြားပေါမြားပွီး ၎င်းငျးတို့အပျေါ ကံအသာစီး အနိုငျရရှိခွငျး၊ ဘုနျးတနျခိုးကွီးခွငျး၊သွဇာအာဏာထကျမွကျခွငျး၊ အကွံအစညျရညျရှယျခကျြမြားအောငျမွငျခွငျး ၊ သူမြားပွဿနာကွားဝငျပါရတတျခွငျး ၊ မိတျဆှရေငျးလူရငျးမြားသစ်စာဖောကျခွငျး ၊ စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြားစိတျအနှောကျယှကျဖွဈရခွငျး ၊ အခွှအေရံပေါမြားခွငျး ၊ မိမိကိုကွညျညိုလေးစားခဈြခငျသူမြားပေါမြားခွငျး၊အပြို၊လူပြိုမြား လူလိမျခံရတတျခွငျး ၊ အဖိုးတနျပစ်စညျးမြားလကျဆောငျရခွငျး တို့ ကွုံရလတ်တံ့။
ငှရေေးကွေးရေး – လှဲခြျောပွီးမှ အောငျမွငျအံ့ ။ ရမလိုလိုဖွဈနတေဲ့ငှကွေေးမြား ကွနျ့ကွာနပွေီး ၊ မရဘူးဟုထငျရသောငှကွေေးမြား ပွနျလညျရရှိအံ့ ။ ကောငျးမလိုလိုနှငျ့ညံ့ပွီး ညံ့မလိုလိုနှငျ့ကောငျးအံ့။ ဝငျသလောကျ ပွနျထှကျနအေံ့ ။ မထငျမှတျတာတှေ ဖွဈလာအံ့ ။ အလှူအတနျးမြားလုပျရအံ့ ။
အခဈြရေး – ခဈြသူ၏ မာယာပရိယာယျကွားမှာ နဈမြောသှားတတျ။ သတိပွုသငျ့။ ကောငျးမလိုလိုနဲ့ ညံ့သှားတတျ။ ညံ့မလိုလိုနဲ့ ကောငျးသှားတတျ။ အသေးအဖှဲလေးကအစ ညှိုနှိုငျးရခကျနတေတျ။အခဈြရေးကံကောငျးသညျဟု ယူဆနိုငျသျောလညျး မိနျးမလညျ ယောင်ျကြားရှုပျမြားနှငျ့တှရေ့တတျခွငျးကို သတိပွုအံ့။ ခဈြသူ၏ ဖုံးကှယျဟနျဆောငျလိမျညာခွငျးကို ခံရတတျ။
အိမျထောငျရေး – အမွငျတှအေယူအဆတှေ မကွာခဏကှဲလှဲအံ့။ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုအားနညျးပွီး ဖုံးကှယျဟနျဆောငျမှုတှေ မြားနအေံ့။ ညီအဈကိုမောငျနှမကဲ့သို့ခငျမငျရသူမြား ၊ ဆှမြေိုးသားခငျြးမြားကွောငျ့ လငျနဲ့မယား အဆငမပွဖွေဈတတျ။
ပညာရေးကံကောငျးစရေနျ – မနကျစောစော ပေါငျမုနျ့(၅)ခပျြ၊ ပနျးအဝါ(၅)ပှငျ့၊ သောကျတျောရေ(၅)ခှကျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၅)တိုငျ ဘုရားလှူပွီး မိမိဖွဈခငျြတာကို ပွတျပွတျသားသား သဲသဲကှဲကှဲ အသံထှကျဆုတောငျးပါ။ ခြိုးမယျ့ရထေဲမှာ ပနျးအဖွူု(၂)ပှငျ့ထညျ့ပွီးရေးခြိုးရငျးလညျးဆုတောငျးပါ။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။
ကနျြးမာရေးညံ့လြှငျပွုလုပျရမညျ့ယတွာ – စနနေညေ့ …။ အိုးတဈလုံးထဲတှငျ မိမိ၏ ခွသေညျး ၊ လကျသညျး ၊ ဆံပငျ အနညျးငယျထညျ့ပါ …။ အကြီအစုတျ ၊ လုံခညျြအစုတျထညျ့ပါ …။ ဆနျလကျတဈဆုပျထညျ့ပါ …။ အိပျယာဘေးမှာ တဈညထားအိပျပါ …။ နောကျမမေ့နကျ စီးနသေောရထေဲသို့သှားမြှောလိုကျပါ …။ မကောငျးတဲ့အခိုကအညံ့တှေ ရောဂါတှပေါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ …။
ယတွာ။ ။ မညျသညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ (၆)နာရီ(၅)မိနဈ တိတိတှငျ ပနျးအဝါ (၅)ပှငျ့ ပေါငျမုနျ့(၅)ခပျြ ၊ သဈသီး(၆)လုံး ၊ ကိတျမုနျ့(၂)ခပျြ ၊ ၊ သောကျတျောရေ (၅)ခှကျ ၊ ဖယောငျးတိုငျ (၅) တိုငျ ၊ ကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ မကွာခဏလှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။ (အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
လုပ်သမျှ ကြံသမျှ အောင်မြင်ထမြောက်လတ္တံ့။ အကြံအစည် ရည်ရွယ်ချက်များကို မြန်ြမန်ဆန်ဆန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်အံ့။စီးပွားလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့်အားနှင့်တိုးချဲ့သင့်အံ့။အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများကို ဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းရှိအံ့။ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်အံ့။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏အကူအညီ ကြီးကြီးမားမားရအံ့။ အလုပ်အပြောင်းအလဲ နေရာအပြောင်းအလဲများကြုံရအံ့။ ၎င်းအပြောင်းအလဲများသည် ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများဖြစ်လတ္တံ့။ သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံးနှင့် ကံတရား၏ မျက်နှာသာပေးခြင်းကို ခံရခြင်း ၊ စိတ်ချမ်းသာလို့ ကိုယ်ကျန်းမာခြင်း ၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်များဖြင့်အောင်မြင်ခြင်း ၊ မိတ်ဆွေရင်း လူရင်းများက သစ္စာဖောက်ခြင်း ၊ အောက်လက်ငယ်သား ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခြင်း ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့၏ ကူညီမစခံရခြင်း ၊ လူအများ ပရိတ်သတ်နှင့် လုပ်ဆောင်ရသောအလုပ်များတွင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အောင်မြင်ခြင်း ၊ စုတ်ရော လာဘ်ရောပွင့်နေခြင်း ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စများအောင်မြင်ခြင်း ၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ထင်ပေါ်ကျောဇောခြင်း ၊ အကောင်းပြောချီးမွမ်းခံရခြင်း ၊ တို့ မုချကြုံတွေ့ရလတ္တံ့။ ကံဇာတာပွင့်လန်းတိုးတက်အံ့။
ငွေရေးကြေးရေး – မိမိရည်မှန်းထားသလောက် အောင်မြင်အံ့ ။ စိတ်ပူပြီးမှ အောင်မြင်အံ့ ။ ဝင်သမျှငွေများလည်း စုမိဆောင်းမိဖြစ်ပြီး အဖတ်တင်အံ့ ။ မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း အသုံးအဖြုန်း ဂရုစိုက်သင့်။ ဆွေများ မိတ်ဆွေများကိုလည်း ငွေကြေးကိစ္စများ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်အံ့ ။ အလှူအတန်း ပရဟိတများလည်း လုပ်ရအံ့ ။
ငွေရေးကြေးရေး အထူးယတြာ – မလိုပါ ။ ငွေတွေဝင်လာလျှင် သိမ်းဆည်းဖို့ သေတ္တာကြီးကြီး ၊ အိတ်ကြီးကြီးအသင့်ဆောင်ထားပါ ။ သုံးဖို့စွဲဖို့ ဝယ်ဖို့ခြမ်းဖို့ အားမွေးထားပါ ။
ငွေရေးကြေးရေးအတွက် ယတြာလုပ်ချင်သပဆိုရင်တော့ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို မျက်နှာသုတ်ပဝါ အစိမ်းရောင် မကြာခဏ လှူပေးပါ ။ ကလေးများကို ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ မကြာခဏကျွေးပါ။
ထီထိုးကံစမ်းရန် – ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ် ဘုရားလှူပါ ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ဒါနလုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ပ ဖ ဘ ဗ မ ၊ စ ဆ ဇ ဈ ည ပါသောထီဆိုင်တွင် (၃) နှင့် (၅) များများပါသော ထီလက်မှတ်ကိုရွေးထိုးပါ။ ပါးစပ်မှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရွတ်ပြီးထိုးပါ …။
အချစ်ရေး – အချစ်စစ် အချစ်မှန် ဖူးစာမှန်များနှင့် ဆုံတွေ့ရလတ္တံ့။ မိမိကိုတန်ဖိုးထား ဂရုစိုက်သော ချစ်သူနှင့်ဆုံတွေ့ရအံ့။ အလွန်လိုက်ဖက်သောစုံတွဲဟု ပတ်ဝန်းကျင်၏ အထင်ကြီးအားကျခြင်းကို ခံရလတ္တံ့။အချစ်ရေးနှင့်ပက်သက်သည့် အကြံအစည်ရည်ရွယ်များ အောင်မြင်လတ္တံ့။ အပျိုလူပျိုများ မျက်နှာပွင့်လန်းပြီး စိတ်ဝင်စားသူများ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေအံ့။
အိမ်ထောင်ရေး – အိမ်ထောင်ဖက်၏အကျိုးပြုခြင်းကိုရရှိအံ့။ စိတ်တူကိုယ်တူဖြင့် ကြည်ဖြူနေအံ့။ ပတ်ဝန်းကျင်၏သွေးထိုးမှုကိုတော့သတိထားပါ။ အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းနေသော်လည်း ကိုယ်ကျင့်တရားကို အထူးဂရုစိုက်ထိမ်းသိမ်းသင့်။ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်သစ္စာရှိပါ။ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ကို တန်ဖိုးထားပါ။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးတွင် ဗုဒ္ဒဟူးသားသမီးများ ၊ နာမည်တွင် ရ ယ လ ၀ ပါသောသူများ ၊ မြစ်နား ချောင်းနား ရေနားနီးသောသူများ ၊ အအေး ၊ အရက်ဘီယာ ၊ ရေသန့် ၊ အလှအပ ၊ အနုပညာ နှင့်ပက်သက်သူများ ဝင်ရှုပ်တတ်။(သတိထားရန်)
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး အထူးယတြာ – အထွေးအထူးလုပ်ရန်မလိုပါ ။ လုပ်ချင်သပဆိုလျှင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ကော်ဖီနှင့်ကိတ်မုန့် မကြာခဏဒါနလုပ်ပါ။
ပညာရေး – မိမိရည်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုအောင်မြင်လတ္တံ့။ နည်းနည်းကြိုးစားယုံမျှဖြင့် များများအောင်မြင်လတ္တံ့။ ဆရာကောင်း သမားကောင်းတွေ့အံ့။ ပညာရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး အကူအညီကောင်း အဆက်အသွယ်ကောင်းများပေါ်လာလတ္တံ့။
ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော သစ်သီး(၆)လုံး ၊ နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၃)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၃)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ နှင်းဆီ(၃)ပွင့်ထည့်ပြီးရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – တနင်္ဂနွေည …။ ကော်ဗူးထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်ရောင်းကောင်းရန် – အမြန်ရောင်းထွက်ချင်တဲ့ ၊ ရောင်းကောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းများကို နှင်းဆီပန်းနဲ့ရိုက်ပေးပါ …။ ပါးစပ်ကနေပြီးတော့လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုတောင်းပါ …။ ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို ဉာဏ်ရှိသလိုလုပ်ပါ …။
ယတြာ။ ။မည်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၆)နာရီ(၇)မိနစ်တိတိတွင် နှင်းဆီ(၇)ပွင့် ၊ သစ်သီး (၆) လုံး ၊ ဆွမ်းပူပူ (၃)ပွဲ ဆီအစိမ်းဆမ်းပါ ၊ သောက်တော်ရေ (၃)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၇) တိုင် ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် မကြာခဏ လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။ (အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
လုပျသမြှ ကွံသမြှ အောငျမွငျထမွောကျလတ်တံ့။ အကွံအစညျ ရညျရှယျခကျြမြားကို မွနျမနျဆနျဆနျ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျသငျ့အံ့။စီးပှားလုပျငနျးမြားကို အငျနှငျ့အားနှငျ့တိုးခြဲ့သငျ့အံ့။အခကျအခဲ အကွပျအတညျးမြားကို ဖွတျကြျောနိုငျစှမျးရှိအံ့။ ပွဿနာမြားကို ဖွရှေငျးနိုငျအံ့။ အမြိုးသမီးတဈယောကျ၏အကူအညီ ကွီးကွီးမားမားရအံ့။ အလုပျအပွောငျးအလဲ နရောအပွောငျးအလဲမြားကွုံရအံ့။ ၎င်းငျးအပွောငျးအလဲမြားသညျ ကောငျးသောအပွောငျးအလဲမြားဖွဈလတ်တံ့။ သကျရှိသကျမဲ့အားလုံးနှငျ့ ကံတရား၏ မကျြနှာသာပေးခွငျးကို ခံရခွငျး ၊ စိတျခမျြးသာလို့ ကိုယျကနျြးမာခွငျး ၊ ကိုယျပိုငျဟနျ ကိုယျပိုငျဉာဏျမြားဖွငျ့အောငျမွငျခွငျး ၊ မိတျဆှရေငျး လူရငျးမြားက သစ်စာဖောကျခွငျး ၊ အောကျလကျငယျသား ဆနျ့ကငျြတျောလှနျခွငျး ၊ ဆှမြေိုးသားခငျြးတို့၏ ကူညီမစခံရခွငျး ၊ လူအမြား ပရိတျသတျနှငျ့ လုပျဆောငျရသောအလုပျမြားတှငျ ကွီးကွီးကယျြကယျြအောငျမွငျခွငျး ၊ စုတျရော လာဘျရောပှငျ့နခွေငျး ၊ ပွညျတှငျးပွညျပခရီးကိစ်စမြားအောငျမွငျခွငျး ၊ နာမညျဂုဏျသတငျး ထငျပျေါကြောဇောခွငျး ၊ အကောငျးပွောခြီးမှမျးခံရခွငျး ၊ တို့ မုခကြွုံတှရေ့လတ်တံ့။ ကံဇာတာပှငျ့လနျးတိုးတကျအံ့။
အခဈြရေး – အခဈြစဈ အခဈြမှနျ ဖူးစာမှနျမြားနှငျ့ ဆုံတှရေ့လတ်တံ့။ မိမိကိုတနျဖိုးထား ဂရုစိုကျသော ခဈြသူနှငျ့ဆုံတှရေ့အံ့။ အလှနျလိုကျဖကျသောစုံတှဲဟု ပတျဝနျးကငျြ၏ အထငျကွီးအားကခြွငျးကို ခံရလတ်တံ့။အခဈြရေးနှငျ့ပကျသကျသညျ့ အကွံအစညျရညျရှယျမြား အောငျမွငျလတ်တံ့။ အပြိုလူပြိုမြား မကျြနှာပှငျ့လနျးပွီး စိတျဝငျစားသူမြား ဝိုငျးဝိုငျးလညျနအေံ့။
အိမျထောငျရေး – အိမျထောငျဖကျ၏အကြိုးပွုခွငျးကိုရရှိအံ့။ စိတျတူကိုယျတူဖွငျ့ ကွညျဖွူနအေံ့။ ပတျဝနျးကငျြ၏သှေးထိုးမှုကိုတော့သတိထားပါ။ အိမျထောငျရေးကံကောငျးနသေျောလညျး ကိုယျကငျြ့တရားကို အထူးဂရုစိုကျထိမျးသိမျးသငျ့။ မိမိအိမျထောငျဖကျအပျေါသစ်စာရှိပါ။ မိမိအိမျထောငျဖကျကို တနျဖိုးထားပါ။
ပညာရေးကံကောငျးစရေနျ – မနကျစောစော သဈသီး(၆)လုံး ၊ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့၊ သောကျတျောရေ(၃)ခှကျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၃)တိုငျ ဘုရားလှူပွီး မိမိဖွဈခငျြတာကို ပွတျပွတျသားသား သဲသဲကှဲကှဲ အသံထှကျဆုတောငျးပါ။ ခြိုးမယျ့ရထေဲမှာ နှငျးဆီ(၃)ပှငျ့ထညျ့ပွီးရေးခြိုးရငျးလညျးဆုတောငျးပါ။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။
ကနျြးမာရေးညံ့လြှငျပွုလုပျရမညျ့ယတွာ – တနင်ျဂနှညေ …။ ကျောဗူးထဲတှငျ မိမိ၏ ခွသေညျး ၊ လကျသညျး ၊ ဆံပငျ အနညျးငယျထညျ့ပါ …။ အကြီအစုတျ ၊ လုံခညျြအစုတျထညျ့ပါ …။ ဆနျလကျတဈဆုပျထညျ့ပါ …။ အိပျယာဘေးမှာ တဈညထားအိပျပါ …။နောကျမမေ့နကျ စီးနသေောရထေဲသို့သှားမြှောလိုကျပါ …။ မကောငျးတဲ့အခိုကအညံ့တှေ ရောဂါတှပေါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ …။
ယတွာ။ ။မညျသညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၆)နာရီ(၇)မိနဈတိတိတှငျ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့ ၊ သဈသီး (၆) လုံး ၊ ဆှမျးပူပူ (၃)ပှဲ ဆီအစိမျးဆမျးပါ ၊ သောကျတျောရေ (၃)ခှကျ ၊ ဖယောငျးတိုငျ (၇) တိုငျ ကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ မကွာခဏ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။ (အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ရလတ္တံ့။ အမှန်ဘက်ကနေ စကားပြောငြင်းခုန်ရခြင်း၊ ဆေးရုံဆေးခန်း၊အမှုအချုပ်၊ထောင်ဂတ်များနှင့်ပက်သက်ရခြင်း၊အနားဝန်းကျင်တွင် မီးလန့်ရှော့ဖြစ်ကြုံရတတ်ခြင်း ၊ သူများပြဿနာကြားဝင် ခေါင်းခံဖြေရှင်းပေးရခြင်းတို့ ကြုံရလတ္တံ့။ အလုပ်နေရာ၊အိမ်နေရာအပြောင်းအလဲများကြုံရလတ္တံ့။ မိမိ၏ ဘဝခံယူချက်များ ၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆများ ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားများ ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များလည်း ပြောင်းလဲအံ့။
စိတ်တိုလွယ် ဒေါသထွက်လွယ် ၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာတွေရှောင်ပါ။ စိတ်ခံစားမှုကိုအလိုမလိုက်ပဲ ဦးနှောက်ဉာဏ်များများသုံးသင့်။ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကိုဦးစားပေးပါ။ မထင်မှတ်တာတွေဖြစ်လာတတ်။ လူအား ၊ ဉာဏ်အား ၊ ဝီရိယအား စိုက်ထုတ်ပြီး များများကြိုးစားသင့်။
စိတ်ပူစရာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာများ ၊ အတိုက်အခံအခက်အခဲများ ၊ မနာလို ရန်လုပ်သူများကြားမှ မိမိ၏အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက်အောင်မြင်မည့်နှစ်ဖြစ်အံ့။ အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုများကို တည်ငြိမ်စွာဖြင့် ကျော်ဖြတ် အနိုင်ယူသင့်။
အချစ်ရေး – ယခင်ကထက် တအားလည်းကောင်းလာနိုင်သလို တအားလည်းဆိုးသွားတတ်။ သတိထားသင့်။ အပျိုလူပျိုများ အချစ်ရေးတွင် မကြာခဏဆိုသလို စကားပြောငြင်းခုန်ဖြေရှင်းရခြင်း ၊ ပူပန်သောကရောက်ရခြင်း တို့ကြုံရအံ့။ စိတ်ပူစရာများ သဝန်တိုစရာများလည်း ရောထွေးနေအံ့။ ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲများဖြစ်အံ့။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး အထူးယတြာ – နှစ်ယောက်ဓါတ်ပုံကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ကပ်ပါ ။ ဓါတ်မှန်ပြားနဲ့ညှပ်ပါ ။ ဓါတ်ဗူးအလွတ်ထဲမှာထည့်ပြီး လုံအောင်ပိတ်ထားပါ။ ( ၃ ရက်တစ်ခါလောက် အဖုံးလှပ်ပေးပါ)
ပညာရေး – မိမိရည်မှန်းထားသလောက်သာ အောင်မြင်နိုင်လတ္တံ့။ ကံတရား၏ အကူအညီပေးခြင်း ၊ နှောက်ယှက်ခြင်းကို မခံရပဲ မိမိရည်မှန်းထားသလောက် အောင်မြင်လတ္တံ့။ စိတ်ပူစရာအချို့ရှိသော်လည်း ပညာရေးရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မြောက်အောင်လတ္တံ့။
ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော အုန်းသီးပါသောမုန့်(၆)ခု၊ ပန်းအနီ(၆)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ အနီရောင်ပန်း (၃)ပွင့်ထည့်ပြီးရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။
( စာမေးပွဲဖြေ၊ အင်တာဗျူးဖြေ၊ အလုပ်လျောက်သည့်အခါများတွင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – တနင်္လာနေ့ည …။ စက္ကူပုံးထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။ နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားများ ကြုံတွေ့ရပါလျှင် …. တနင်္လာနေ့ညဝတ်အိပ်ထားသော အဝတ်ဟောင်းတစ်စုံကို နောက်နေ့မနက်စော လမ်းတွင်သွားစွန့်ပါ။ (ငါ့မှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ) (၂)လတစ်ခါလုပ်ပါ။အရေးအကြောင်းကိစ္စပေါ်လျှင်ထပ်လုပ်ပါ။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၇)နာရီ(၁၀)မိနစ်တိတိတွင် နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊ ယို(၄)ပွဲ ၊ သောက်တော်ရေ (၄)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၄) တိုင် နေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့်တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။ (အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
ငှရေေးကွေးရေး – အကွီးအကဲကူညီမစခွငျးကွောငျ့သျော၎င်းငျး ၊ စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြားကွောငျ့သျော၎င်းငျး ငှကွေေးမြားရရှိလတ်တံ့။ ငှအေဝငျနညျးပွီး ဝငျသလောကျပွနျထှကျနအေံ့။ ငှေ မမွဲအံ့။ ငှကွေေးကိစ်စမြား စိတျပူ ထဈငေါ့ပွီးမှ အောငျမွငျအံ့။ ငှရေငျးနှီးရသောအလုပျမြား သတိထားပွီးလုပျပါ။
အခဈြရေး – ယခငျကထကျ တအားလညျးကောငျးလာနိုငျသလို တအားလညျးဆိုးသှားတတျ။ သတိထားသငျ့။ အပြိုလူပြိုမြား အခဈြရေးတှငျ မကွာခဏဆိုသလို စကားပွောငွငျးခုနျဖွရှေငျးရခွငျး ၊ ပူပနျသောကရောကျရခွငျး တို့ကွုံရအံ့။ စိတျပူစရာမြား သဝနျတိုစရာမြားလညျး ရောထှေးနအေံ့။ ကွီးမားသော အပွောငျးအလဲမြားဖွဈအံ့။
အိမျထောငျရေး – ရနျဖွဈလိုကျ ပွနျခဈြလိုကျ ဖွဈနလေတ်တံ့။ မကွာခဏ အိပျယာခှဲအိပျပေးပါ။- မကွာခဏဆိုသလို အသေးအဖှဲကိစ်စလေးမှအစ ကတောကျကဆဖွဈရခွငျး တို့ ကွုံတှရေ့လတ်တံ့။ ဘေးပယောဂမြား ဝငျလာတတျ။ ကွားလူနှောကျယှကျတတျ။ သတိထားသငျ့။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမရှိပါ။
ပညာရေးကံကောငျးစရေနျ – မနကျစောစော အုနျးသီးပါသောမုနျ့(၆)ခု၊ ပနျးအနီ(၆)ပှငျ့၊ သောကျတျောရေ(၅)ခှကျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၅)တိုငျ ဘုရားလှူပွီး မိမိဖွဈခငျြတာကို ပွတျပွတျသားသား သဲသဲကှဲကှဲ အသံထှကျဆုတောငျးပါ။ ခြိုးမယျ့ရထေဲမှာ အနီရောငျပနျး (၃)ပှငျ့ထညျ့ပွီးရေးခြိုးရငျးလညျးဆုတောငျးပါ။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။
ကနျြးမာရေးညံ့လြှငျပွုလုပျရမညျ့ယတွာ – တနင်ျလာနညေ့ …။ စက်ကူပုံးထဲတှငျ မိမိ၏ ခွသေညျး ၊ လကျသညျး ၊ ဆံပငျ အနညျးငယျထညျ့ပါ …။ အကြီအစုတျ ၊ လုံခညျြအစုတျထညျ့ပါ …။ ဆနျလကျတဈဆုပျထညျ့ပါ …။ အိပျယာဘေးမှာ တဈညထားအိပျပါ …။ နောကျမမေ့နကျ စီးနသေောရထေဲသို့သှားမြှောလိုကျပါ …။ မကောငျးတဲ့အခိုကအညံ့တှေ ရောဂါတှပေါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ …။
ယတွာ။ ။မညျ့သညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၇)နာရီ(၁၀)မိနဈတိတိတှငျ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့၊ ယို(၄)ပှဲ ၊ သောကျတျောရေ (၄)ခှကျ ၊ ဖယောငျးတိုငျ (၄) တိုငျ နအေိမျဘုရားတှငျ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။ (အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
အတိုက်အခံ အခက်အခဲများကြားမှ အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်လတ္တံ့။ အပေါင်းအသင်းမှားတတ်။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောဆိုလုပ်ကိုင် ဆုံးဖြတ်တာတွေသတိပြုပါ။
အဖက်ဖက်တွင် အလွန်အမင်းလည်းကောင်းနိုင်သလို၊အလွန်အမင်းလည်းညံ့သွားလတ္တံ့။ လူရောစိတ်ပါ တည်ငြိမ်စွာဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာရည်ရွယ်ချက်များကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှင် အောင်မြင်လတ္တံ့။
လူကြီးတစ်ယောက်နှင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်။ အောက်လက်ငယ်သား ရွှေ ရတနာအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်။ ဘာကိုမှ စိတ်တိုင်းမကျ အားမရဖြစ်နေအံ့။ အများနှင့်တစ်ယောက် အခန့်မသင့်ဖြစ်အံ့။ စိတ်ပူစရာများ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာများ တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရအံ့။
အလုပ်နေရာ၊အိမ်နေရာ၊အတွေးအခေါ်အယူအဆ၊ဘဝခံယူချက်များ အပြောင်းအလဲဖြစ်အံ့။ ဆန့်ကျင့်ဘက်လိင်များထံမှ အကူအညီကောင်းများရလတ္တံ့။ အလုပ်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ အတိုက်အခံ အခက်အခဲများ ကြုံရတတ်။စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်ရအံ့။
ထီထိုးကံစမ်းရန် – သရက်ယိုဘုရားလှူပါ ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ဒါနလုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် (သ ဟ ၊ ရ ယ လ ၀ ) ပါသောထီဆိုင်တွင် (၄) နှင့် (၆) များများပါသော ထီလက်မှတ်ကိုရွေးထိုးပါ။ ပါးစပ်မှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရွတ်ပြီးထိုးပါ …။
ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော ကိတ်မုန့်(၂)ချပ်၊ ပန်းအဝါ(၅)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ ပန်းအဝါ(၅)ပွင့်ထည့်ပြီးရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – အင်္ဂါနေ့ည …။ ရေသန့်ဗူးအခွံထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်ရောင်းကောင်းရန် – အမြန်ရောင်းထွက်ချင်တဲ့ ၊ ရောင်းကောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းများကို ပန်းအဖြူ(၂)ပွင့်နဲ့ရိုက်ပေးပါ …။ ပါးစပ်ကနေပြီးတော့လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုတောင်းပါ …။ ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို ဉာဏ်ရှိသလိုလုပ်ပါ …။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက် (၅)နာရီ (၂၀)မိနစ်တိတိတွင် အဖြူရောင်ပန်း(၂)ပွင့် ၊ ပန်းအဝါ (၅)ပွင့် ၊ အုန်းသီးပါသောမုန့် (၆)ခု ၊ သောက်တော်ရေ (၁)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၁) တိုင် ၊ ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။ (အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
အထူးယတြာ။ ။ အင်္ဂါနေ့ညဝတ်အိပ်ထားသော အဝတ်ဟောင်းတစ်စုံကို နောက်နေ့မနက်စော လမ်းတွင်သွားစွန့်ပါ။ (ငါ့မှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ) (၂)လတစ်ခါလုပ်ပါ။အကြောင်းကိစ္စပေါ်လျှင်ထပ်လုပ်ပါ။
အဖကျဖကျတှငျ အလှနျအမငျးလညျးကောငျးနိုငျသလို၊အလှနျအမငျးလညျးညံ့သှားလတ်တံ့။ လူရောစိတျပါ တညျငွိမျစှာဖွငျ့ လုပျငနျးဆောငျတာရညျရှယျခကျြမြားကို ကွိုးစားဆောငျရှကျလြှငျ အောငျမွငျလတ်တံ့။
အလုပျနရော၊အိမျနရော၊အတှေးအချေါအယူအဆ၊ဘဝခံယူခကျြမြား အပွောငျးအလဲဖွဈအံ့။ ဆနျ့ကငျြ့ဘကျလိငျမြားထံမှ အကူအညီကောငျးမြားရလတ်တံ့။ အလုပျတိုငျး နရောတိုငျးမှာ အတိုကျအခံ အခကျအခဲမြား ကွုံရတတျ။စိတျပငျပနျး လူပငျပနျးဖွဈရအံ့။
ကနျြးမာရေးညံ့လြှငျပွုလုပျရမညျ့ယတွာ – အင်ျဂါနညေ့ …။ ရသေနျ့ဗူးအခှံထဲတှငျ မိမိ၏ ခွသေညျး ၊ လကျသညျး ၊ ဆံပငျ အနညျးငယျထညျ့ပါ …။ အကြီအစုတျ ၊ လုံခညျြအစုတျထညျ့ပါ …။ ဆနျလကျတဈဆုပျထညျ့ပါ …။ အိပျယာဘေးမှာ တဈညထားအိပျပါ …။နောကျမမေ့နကျ စီးနသေောရထေဲသို့သှားမြှောလိုကျပါ …။ မကောငျးတဲ့အခိုကအညံ့တှေ ရောဂါတှပေါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ …။
အထူးယတွာ။ ။ အင်ျဂါနညေ့ဝတျအိပျထားသော အဝတျဟောငျးတဈစုံကို နောကျနမေ့နကျစော လမျးတှငျသှားစှနျ့ပါ။ (ငါ့မှာရှိနတေဲ့မကောငျးတဲ့အခိုကျအညံ့တှအေားလုံး ပါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ) (၂)လတဈခါလုပျပါ။အကွောငျးကိစ်စပျေါလြှငျထပျလုပျပါ။
အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း၊ခြံ၊ကား၊ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွင်ရှိလတ္တံ့။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်း၊မျက်နှာပွင့် စန်းပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများ စုဆောင်းတိုးပွားခြင်းတို့ကြုံရလတ္တံ့။
စိတ်ကူးဉာဏ်ပေါ်သလောက် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ။အချိန်မဖြုန်းသင့်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိသမျှ ရဲရဲလုပ်ပါ။
ဘာပဲလုပ်လုပ် အတိုက်အခံ အခက်အခဲ စိတ်ပူစရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာများကြုံတွေ့ပြီးမှ အောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတ်ကံ အကောင်းအဆိုး နှစ်မျိုးစလုံး၏ အကျိုးကို တွေ့ကြုံခံစားရလတ္တံ့။
ငွေရေးကြေးရေး – အတိတ်ကံကို အကြောင်းပြု၍ ငွေကြေးအစုလိုက်အပုံလိုက်ရအံ့။ ငွေကြေးကံ အထူးကောင်းနေအံ့။ ငွေကြေးကိစ္စများ မိမိရည်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုအောင်မြင်အံ့။ မိမိရည်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုစုဆောင်းရအံ့။ တိုးပွားအံ့။ မလိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ငွေကြေးဖြုန်းတီးမိတတ်တာကိုတော့ သိထားသင့်။ ငွေကြေးကိစ္စများ ရဲရဲတင်းတင်း ဆောင်ရွက်သင့်။
ထီထိုးကံစမ်းရန် – ကြက်သားကြော်ဘုရားလှူပါ ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ဒါနလုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ( သ ဟ က ခ ဂ ဃ င ) ပါသောထီဆိုင်တွင် (၂) နှင့် (၆) များများပါသော ထီလက်မှတ်ကိုရွေးထိုးပါ။ ပါးစပ်မှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရွတ်ပြီးထိုးပါ …။
အချစ်ရေး – အပျိုလူပျိုများ အတိတ်ဘဝက ဆုတောင်းရှိခဲ့ဖူးသော အချစ်ဟောင်း အဆက်ဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရလတ္တံ့။ ချစ်သူထံမှ အမှတ်တရလက်ဆောင်တစ်ခု ကြီးကြီးမားမားရအံ့။ မိမိကိုစိတ်ဝင်စား ချစ်ကြိုက်နေသူများ အများအပြားပေါ်လာလတ္တံ့။ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေအံ့။ အလွန်အမင်း စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ခုန်နေရအံ့။ စိတ်ကောက်လိုက် ပြန်တည့်လိုက်ဖြင့် ကြည်နူးစရာများ အတိပြီးနေအံ့။
အိမ်ထောင်ရေး – တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှု မျှဝေခံစားမှုများဖြင့် သာယာနေအံ့။ မယ်တစ်ထမ်း မောင်တစ်ရွက်ဖြင့် ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီနေအံ့။အိမ်ထောင်ရေးသုခ ခံစားရအံ့။ စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ခုန် ကြည်နူးမှုများ ရေထွေးနေလတ္တံ့။ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ သဝန်တိုခြင်းကို ခံရအံ့။ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအကြောင်းပြု၍ ငွေကြေးစီးပွားဥစ္စာများ တိုးပွားလတ္တံ့။ အိမ်ထောင်ဖက်ထံမှ အကူအညီကောင်း အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းများရလတ္တံ့။
ပညာရေး – ပညာရေးကံတအားကောင်းနေအံ့။ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်မြင်အံ့။ နည်းနည်ူးကြိုးစားလိုက်ယုံနှင့် များများအောင်မြင်လတ္တံ့။ ဆရာကောင်း သမားကောင်းတွေ့ရအံ့။
ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော သစ်သီး(၆)လုံး၊ ပန်းအဖြူ(၅)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ ပန်းအဖြူု(၂)ပွင့်ထည့်ပြီးရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည …။ ပုံးတစ်ခု (သို့) မုန့်ပုံးအခွံထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
ယတြာ။ ။ မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၆)နာရီ (၃၂) မိနစ်တိတိတွင် ဆွမ်းပူပူ(၃)ပန်းကန် ဆီအစိမ်းဆမ်း ၊ သစ်သီး(၆)လုံး ၊ ကိတ်မုန့်(၂)ချပ် သောက်တော်ရေ (၂)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၂) တိုင် ၊ မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။ (အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
( အထူးအားဖြင့် – အတာစားသောနေ့သည် ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြာသပတေးသမီးများသည် သင်္ကြန်အတက်နေ့ မဟာသင်္ကြန်အတက်ချိန် – ၁၃၈၁ ခု ၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် (၉) ရက် ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ (၁၆) ရက် ၊ ကြာသပတေးနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်စက် (၃) နာရီ (၃၉) မိနစ် (ဝ) စက္ကန့်အချိန်တွင် …
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှင့်တကွ ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အား သစ်သီး(၆)လုံး၊ ပန်းအဖြူ(၅)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် ပူဇော်လှူဒါန်းပြီး … ။
၁၃၈၂ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာလုံးတွင်လည်း ဘာသာရေးပိုလုပ်ခြင်း ၊ ကောင်းမှုကုသလိုလ်များ ပိုမိုပြုလုပ်ခြင်း ၊ မေတ္တာများများပို့ခြင်း ၊ သည်းခံစိတ်မွေးခြင်း ၊ အစစအရာရာ သတိတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ဖြတ်သန်းခြင်းအားဖြင့် …
ကြာသပတေးသားသမီးများသည် ၁၃၈၂ ခုနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးတွင် အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း ၊ အခိုက်အညံ့ကင်းရှင်း ၊ ရောဂါဘယကင်းရှင်းပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ရရှိခံစားရကာ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများသည် ဧကံမုချဖြစ်လတ္တံ့။)
အတိတျကံကိုအကွောငျးပွုပွီးငှအေစုလိုကျအပုံလိုကျရခွငျး၊ထီဆုကွီးပေါကျခွငျး၊ခွံ၊ကား၊ကြောကျ ကောငျးသောဝငျခွငျးတှငျရှိလတ်တံ့။ အခဈြရေးမတ်ေတာရေးကံကောငျးခွငျး၊မကျြနှာပှငျ့ စနျးပှငျ့ခွငျး၊ငှကွေေးဥစ်စာပစ်စညျးမြား စုဆောငျးတိုးပှားခွငျးတို့ကွုံရလတ်တံ့။
စိတျကူးဉာဏျပျေါသလောကျ လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျပါ။အခြိနျမဖွုနျးသငျ့။ရညျရှယျခကျြရှိသမြှ ရဲရဲလုပျပါ။
ဘာပဲလုပျလုပျ အတိုကျအခံ အခကျအခဲ စိတျပူစရာ စိတျလှုပျရှားစရာမြားကွုံတှပွေီ့းမှ အောငျမွငျလတ်တံ့။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတျကံ အကောငျးအဆိုး နှဈမြိုးစလုံး၏ အကြိုးကို တှကွေုံ့ခံစားရလတ်တံ့။
အိမျထောငျရေး – တဈဦးနဲ့တဈဦး နားလညျမှု မြှဝခေံစားမှုမြားဖွငျ့ သာယာနအေံ့။ မယျတဈထမျး မောငျတဈရှကျဖွငျ့ ရှသှေ့ားနောကျလိုကျညီနအေံ့။အိမျထောငျရေးသုခ ခံစားရအံ့။ စိတျလှုပျရှား ရငျခုနျ ကွညျနူးမှုမြား ရထှေေးနလေတ်တံ့။ မိမိအိမျထောငျဖကျ၏ သဝနျတိုခွငျးကို ခံရအံ့။ အိမျထောငျဖကျကိုအကွောငျးပွု၍ ငှကွေေးစီးပှားဥစ်စာမြား တိုးပှားလတ်တံ့။ အိမျထောငျဖကျထံမှ အကူအညီကောငျး အကွံကောငျးဉာဏျကောငျးမြားရလတ်တံ့။
ပညာရေးကံကောငျးစရေနျ – မနကျစောစော သဈသီး(၆)လုံး၊ ပနျးအဖွူ(၅)ပှငျ့၊ သောကျတျောရေ(၅)ခှကျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၅)တိုငျ ဘုရားလှူပွီး မိမိဖွဈခငျြတာကို ပွတျပွတျသားသား သဲသဲကှဲကှဲ အသံထှကျဆုတောငျးပါ။ ခြိုးမယျ့ရထေဲမှာ ပနျးအဖွူု(၂)ပှငျ့ထညျ့ပွီးရေးခြိုးရငျးလညျးဆုတောငျးပါ။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။
ကနျြးမာရေးညံ့လြှငျပွုလုပျရမညျ့ယတွာ – ဗုဒ်ဓဟူးနညေ့ …။ ပုံးတဈခု (သို့) မုနျ့ပုံးအခှံထဲတှငျ မိမိ၏ ခွသေညျး ၊ လကျသညျး ၊ ဆံပငျ အနညျးငယျထညျ့ပါ …။ အကြီအစုတျ ၊ လုံခညျြအစုတျထညျ့ပါ …။ ဆနျလကျတဈဆုပျထညျ့ပါ …။ အိပျယာဘေးမှာ တဈညထားအိပျပါ …။နောကျမမေ့နကျ စီးနသေောရထေဲသို့သှားမြှောလိုကျပါ …။ မကောငျးတဲ့အခိုကအညံ့တှေ ရောဂါတှပေါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ …။
ယတွာ။ ။ မညျ့သညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၆)နာရီ (၃၂) မိနဈတိတိတှငျ ဆှမျးပူပူ(၃)ပနျးကနျ ဆီအစိမျးဆမျး ၊ သဈသီး(၆)လုံး ၊ ကိတျမုနျ့(၂)ခပျြ သောကျတျောရေ (၂)ခှကျ ၊ ဖယောငျးတိုငျ (၂) တိုငျ ၊ မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။ (အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
( အထူးအားဖွငျ့ – အတာစားသောနသေ့ညျ ကွာသပတေးနဖွေ့ဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကွာသပတေးသမီးမြားသညျ သင်ျကွနျအတကျနေ့ မဟာသင်ျကွနျအတကျခြိနျ – ၁၃၈၁ ခု ၊ တနျခူးလပွညျ့ကြျော (၉) ရကျ ၊ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ၊ ဧပွီလ (၁၆) ရကျ ၊ ကွာသပတေးနေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျနံနကျစကျ (၃) နာရီ (၃၉) မိနဈ (ဝ) စက်ကနျ့အခြိနျတှငျ …
မွတျစှာဘုရားရှငျကိုယျတျောမွတျကွီးနှငျ့တကှ ရဟန်တာအရှငျသူမွတျအပေါငျးတို့အား သဈသီး(၆)လုံး၊ ပနျးအဖွူ(၅)ပှငျ့၊ သောကျတျောရေ(၅)ခှကျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၅)တိုငျ ပူဇျောလှူဒါနျးပွီး … ။
၁၃၈၂ ခုနှဈ တဈနှဈတာလုံးတှငျလညျး ဘာသာရေးပိုလုပျခွငျး ၊ ကောငျးမှုကုသလိုလျမြား ပိုမိုပွုလုပျခွငျး ၊ မတ်ေတာမြားမြားပို့ခွငျး ၊ သညျးခံစိတျမှေးခွငျး ၊ အစစအရာရာ သတိတရားလကျကိုငျထားပွီး ဖွတျသနျးခွငျးအားဖွငျ့ …
ကွာသပတေးသားသမီးမြားသညျ ၁၃၈၂ ခုနှဈတဈနှဈတာလုံးတှငျ အန်တရာယျကငျးဘေးရှငျး ၊ အခိုကျအညံ့ကငျးရှငျး ၊ ရောဂါဘယကငျးရှငျးပွီး ကောငျးကြိုးခမျြးသာမြား ရရှိခံစားရကာ ကောငျးသောအပွောငျးအလဲမြားသညျ ဧကံမုခဖြွဈလတ်တံ့။)
အောက်လက်ငယ်သား ရွှေ ရတနာအတွက် စိတ်ပူရအံ့။ ကျန်းမာရေးချူခြာခြင်း၊ဆေးရုံဆေးခန်းများနှင့်ပက်သက်ရခြင်း၊ဘာမှန်းမသိ ရောဂါရှာမရပဲ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ အစားမှားဆေးမှားဖြစ်ခြင်း၊ စကားပြောငြင်းခုန်ရခြင်း၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်ခြင်း၊ စကားပြောကျွံခြင်း၊ လွန်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်း၊ စာရွက်စာတမ်း၊ စပ်တူရှယ်ယာကိစ္စများနှင့်ပက်သက်ပြီး စိတ်ညစ်ရတတ်ခြင်း တို့ကြုံရအံ့။ ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများဖြစ်လတ္တံ့။ ကံ အလွန်အမင်းကောင်းနိုင်သလို ၊ ကံ အလွန်အမင်းလည်း ဆိုးလတ္တံ့။ ငြိမ်ငြိမ်နေလျှင် အလွန်အမင်းညံ့လတ္တံ့။ လှုပ်ရှားလျှင် ကံအလွန်အမင်းကောင်းလတ္တံ့။ အိပ်ယာပြောင်းအိပ်ခြင်း၊ခရီးထွက်ခြင်း စသည့် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေထိုင်ဆောင်ရွက်ပါက ကံကောင်းလတ္တံ့။
ငွေရေးကြေးရေး အထူးယတြာ – ငွေမြဲရန် မကြာခဏ ငါသေတ္တာဗူးပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆုတောင်းပါ ။
ငွေကြေးကံကောင်းရန် မရှိနွမ်းပါးသောသက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးကို ဆပ်ပြာအကြမ်း ၊ လုက်သုပ်ပဝါအကြမ်း ၊ ပိုက်ဆံအနွမ်း မကြာခဏ လှူဒါန်းရင်း ဆုတောင်းပါ ။
ဘယ်လက်မှာ (က) ကကြီးအက္ခရာရေး ၊ ညာဘက်လက်မှာ (ယ) ယပလက် အက္ခရာရေး ၊ လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးဆုတောင်းပါ။
( ၎င်းယတြာများသည် လုပ်ရသည်မှာလွယ်ကူသော်လည်း အင်မတန်ထိရောက်အောင်မြင်သော ယတြာများဖြစ်သည်။ ငွေကြေးကံကောင်းပြီး ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်ချမ်းသာသွားသည်များကို မကြာခဏတွေ့ကြုံဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည် လေးလေးနက်နက် ဆောင်ရွက်စေလိုပါသည်။)
ထီထိုးကံစမ်းရန် – အကြော်(၁၂)ခု ဘုရားလှူပါ ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ဒါနလုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် (အ ဥ က ခ ဂ ဃ င ) ပါသောထီဆိုင်တွင် (၁) နှင့် (၂) များများပါသော ထီလက်မှတ်ကိုရွေးထိုးပါ။ ပါးစပ်မှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရွတ်ပြီးထိုးပါ …။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးတွင် စနေသားသမီးများ ၊ နာမည်တွင် တ ထ ဒ ဓ န ပါသောသူများ ၊ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား ၊ မီးလျှပ်စစ် ၊ အထည်အလိပ် ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့်ပက်သက်သူများ ဝင်ရှုပ်တတ်။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး အထူးယတြာ – နှစ်ယောက်ဓါတ်ပုံကိုကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ကပ်။ စွယ်တော်ရွက်နှင့်ညှပ် ၊ ခေါင်းအုံးအောက်မှာထားအိပ်ပါ။
ပညာရေး – ပညာရေးကံအလယ်အလတ်သာရှိအံ့။ မိမိရည်မှန်းထားသလောက်သာ အောင်မြင်အံ့။ ဝီရိယအား ၊ ဉာဏ်အား ၊ လူအားစိုက်ထုတ်ပြီး ကြိုးစားသင့်။ အပေါင်းအသင်းမှားတတ်သည့်အတွက် ဂရိုစိုက်သင့်။
ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော လက်ဖက်ရည်(၄)ခွက်၊ နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၃)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၃)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ ရွှေရည် ငွေရည် ထည့်ပြီး ရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – ကြာသပတေးနေ့ည …။ သံပုံးတစ်ခုထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။ နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားရှိလျှင် အထူးပြုလုပ်သင့်သော ယတြာ … ကြာသပတေးနေ့ညဝတ်အိပ်ထားသော အဝတ်ဟောင်းတစ်စုံကို နောက်နေ့မနက်စော လမ်းတွင်သွားစွန့်ပါ။ (ငါ့မှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ) (၂)လတစ်ခါလုပ်ပါ။အရေးအကြောင်းကိစ္စပေါ်လျှင်ထပ်လုပ်ပါ။
ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်ရောင်းကောင်းရန် – အမြန်ရောင်းထွက်ချင်တဲ့ ၊ ရောင်းကောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းများကို ရေခွက် နဲ့ရိုက်ပေးပါ …။ ရွှေရည်ဖြန်းပေးပါ …။ (ရွှေစိမ်ထားသောရေ ) ပါးစပ်ကနေပြီးတော့လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုတောင်းပါ …။ ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို ဉာဏ်ရှိသလိုလုပ်ပါ …။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၇)နာရီ (၄၀) မိနစ်တိတိတွင် ယို(၄)ပွဲ ၊ နှင်းဆီ(၇)ပွင့် ၊ နွားနို့(၃)ခွက် ၊ သောက်တော်ရေ (၃)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၃) တိုင် ၊ ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။ (အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
စိတျကူးအကွံအစညျ ရညျရှယျခကျြမြားကို စှနျ့စှနျ့စားစား ကွိုးစားဆောငျရှကျလြှငျ အောငျမွငျလတ်တံ့။
အောကျလကျငယျသား ရှေ ရတနာအတှကျ စိတျပူရအံ့။ ကနျြးမာရေးခြူခွာခွငျး၊ဆေးရုံဆေးခနျးမြားနှငျ့ပကျသကျရခွငျး၊ဘာမှနျးမသိ ရောဂါရှာမရပဲ တရှောငျရှောငျဖွဈခွငျး၊ အစားမှားဆေးမှားဖွဈခွငျး၊ စကားပွောငွငျးခုနျရခွငျး၊ ခိုကျရနျဖွဈပှားတတျခွငျး၊ စကားပွောကြှံခွငျး၊ လှနျခွငျး၊ စကျပစ်စညျး၊ စာရှကျစာတမျး၊ စပျတူရှယျယာကိစ်စမြားနှငျ့ပကျသကျပွီး စိတျညဈရတတျခွငျး တို့ကွုံရအံ့။ ကွီးမားသောအပွောငျးအလဲမြားဖွဈလတ်တံ့။ ကံ အလှနျအမငျးကောငျးနိုငျသလို ၊ ကံ အလှနျအမငျးလညျး ဆိုးလတ်တံ့။ ငွိမျငွိမျနလြှေငျ အလှနျအမငျးညံ့လတ်တံ့။ လှုပျရှားလြှငျ ကံအလှနျအမငျးကောငျးလတ်တံ့။ အိပျယာပွောငျးအိပျခွငျး၊ခရီးထှကျခွငျး စသညျ့ လှုပျလှုပျရှားရှားနထေိုငျဆောငျရှကျပါက ကံကောငျးလတ်တံ့။
ငှရေေးကွေးရေး – ငှတှေဝေငျနပွေီး အကွှေးတငျနအေံ့။ ငှလေိမျခံရတတျ။သတိထားသငျ့။ ဝငျသမြှငှမြေား ပွနျထှကျပွီး ငှမေမွဲပဲဖွဈနအေံ့။ ငှမေဝငျခငျကပငျ သုံးစရာ ကုနျစရာမြားက စောငျ့ကွိုနအေံ့။ ငှအေတှကျ အနညျးငယျ စိတျပူရအံ့။ ရစရာပေးစရာငှမြေား ထဈငေါ့ကွနျ့ကွာ လှဲခြျောတတျ။
ငှရေေးကွေးရေး အထူးယတွာ – ငှမွေဲရနျ မကွာခဏ ငါသတ်ေတာဗူးပျေါတှငျ ဖယောငျးတိုငျထှနျးပွီး ဆုတောငျးပါ ။
ငှကွေေးကံကောငျးရနျ မရှိနှမျးပါးသောသကျကွီးရှယျအိုတဈဦးကို ဆပျပွာအကွမျး ၊ လုကျသုပျပဝါအကွမျး ၊ ပိုကျဆံအနှမျး မကွာခဏ လှူဒါနျးရငျး ဆုတောငျးပါ ။
( ၎င်းငျးယတွာမြားသညျ လုပျရသညျမှာလှယျကူသျောလညျး အငျမတနျထိရောကျအောငျမွငျသော ယတွာမြားဖွဈသညျ။ ငှကွေေးကံကောငျးပွီး ဘဝတဈဆဈခြိုးပွောငျးလဲမွငျ့တကျခမျြးသာသှားသညျမြားကို မကွာခဏတှကွေုံ့ဖူးပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ယုံယုံကွညျကွညျ လေးလေးနကျနကျ ဆောငျရှကျစလေိုပါသညျ။)
အခဈြရေး – ခဈြခွငျးမတ်ေတာမြား သံယောဇဉျမြားလညျး ပွောငျးလဲသှားတတျ။ မတညျမငွိမျဖွဈအံ့။ ထိလှယျ ရှလှယျဖွဈအံ့။ ဆုပျလညျးစူး စားလညျးရူးအခွအေနမြေားကွုံရအံ့။ အဆငျမသငျ့လြှငျ လမျးခှဲပွတျစဲသှားရအံ့။ ရနျဖွဈလိုကျ ပွနျခဈြလိုကျဖွငျ့ ဂဏာမငွိမျဖွဈတတျခွငျး ၊ စိတျအပွောငျးအလဲမွနျခွငျး ၊ ခဈြသူပါပွောငျးသှားတတျခွငျး တို့ကွုံရလတ်တံ့။
အိမျထောငျရေး – အကောငျးအဆိုးရောထှေးနလေတ်တံ့။ စိတျပူစရာမြား စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈစရာမြား ကွညျနူးရငျခုနျစရာမြား ရောထှေးနအေံ့။ မကွာခဏဆိုသလို ခှဲခှာနလြှေငျ အညံ့မြားပွပြေောကျပွီး အိမျထောငျရေးသုခမြားခံစားရလတ်တံ့။ မကွာခဏ အိပျယာခှဲအိပျပါ။ပွောငျးအိပျပါ။
ပညာရေးကံကောငျးစရေနျ – မနကျစောစော လကျဖကျရညျ(၄)ခှကျ၊ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့၊ သောကျတျောရေ(၃)ခှကျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၃)တိုငျ ဘုရားလှူပွီး မိမိဖွဈခငျြတာကို ပွတျပွတျသားသား သဲသဲကှဲကှဲ အသံထှကျဆုတောငျးပါ။ ခြိုးမယျ့ရထေဲမှာ ရှရေညျ ငှရေညျ ထညျ့ပွီး ရေးခြိုးရငျးလညျးဆုတောငျးပါ။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။( စာမေးပှဲဖွေ၊ အငျတာဗြူးဖွေ၊ အလုပျလြောကျသညျ့အခါမြားတှငျလညျး ပွုလုပျနိုငျပါသညျ)
ကနျြးမာရေးညံ့လြှငျပွုလုပျရမညျ့ယတွာ – ကွာသပတေးနညေ့ …။ သံပုံးတဈခုထဲတှငျ မိမိ၏ ခွသေညျး ၊ လကျသညျး ၊ ဆံပငျ အနညျးငယျထညျ့ပါ …။ အကြီအစုတျ ၊ လုံခညျြအစုတျထညျ့ပါ …။ ဆနျလကျတဈဆုပျထညျ့ပါ …။ အိပျယာဘေးမှာ တဈညထားအိပျပါ …။ နောကျမမေ့နကျ စီးနသေောရထေဲသို့သှားမြှောလိုကျပါ …။ မကောငျးတဲ့အခိုကအညံ့တှေ ရောဂါတှပေါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ …။
ယတွာ။ ။မညျ့သညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၇)နာရီ (၄၀) မိနဈတိတိတှငျ ယို(၄)ပှဲ ၊ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့ ၊ နှားနို့(၃)ခှကျ ၊ သောကျတျောရေ (၃)ခှကျ ၊ ဖယောငျးတိုငျ (၃) တိုငျ ၊ ကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။ မိမိအလိုရှိရာမြား ဖွဈခငျြတာမြားကို အတိအကြ အသံထှတျပွီးဆုတောငျးပါ …။ (အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
စီးပွားတက်အံ့။ ဘဝတစ်ဆင့်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်သွားအံ့။ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျောဇောထင်ရှားအံ့။
အကောင်းပြော ချီးမွမ်း ခံရလတ္တံ့။ တရားထူးအသိထူးရအံ့။ ရာထူးတိုးလစာတိုးခြင်း၊ အလုပ်နေရာကောင်းရရှိခြင်းများကြုံလတ္တံ့။ ကံတရား သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံးတို့၏ မျက်နှာသာပေးခြင်း ခံရလတ္တံ့။
စိတ်ထဲမှာ ဖြတ်ခနဲပေါ်လာလျှင် ဆတ်ခနဲ ထလုပ်ပါ။ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာမည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း ၊ အခြေအနေကောင်း ၊ အဆက်အသွယ်ကောင်း ၊ အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်း ၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများရလတ္တံ့။
ကောင်းသောအကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်လတ္တံ့။ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာများ ရွေးချယ်ရခက်သော အခြေအနေများကြုံရလတ္တံ့။ လူကြီးတစ်ယောက်၏အကူအညီ ကြီးကြီးမားမားရအံ့။ မိတ်ဆွေရင်း ဆရာရင်းများထံမှလည်း အကူအညီကောင်းများရအံ့။
ငွေရေးကြေးရေး အထူးယတြာ – ခြေသည်း လက်သည်း ဆံပင် အမှိုက် ကော်ပစ္စည်းအစုတ်များကို ကော်ဗူးအစုတ်ထဲတွင်ထည့်ပြီး နောက်ဖေးတွင် မကြာခဏစွန့်ရင်း ဆုတောင်းပါ။ ( ဝင်လာသမျှငွေတွေကို မလေလွင့်အောင် အထူးဂရုပြုပါ)
ထီထိုးကံစမ်းရန် – စမူဆာနှင့်လက်ဖက်ရည် ဘုရားလှူပါ ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ဒါနလုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ( စ ဆ ဇ ဈ ည ရ ယ လ ၀ ) ပါသောထီဆိုင်တွင် (၃) နှင့် (၄) များများပါသော ထီလက်မှတ်ကိုရွေးထိုးပါ။ ပါးစပ်မှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရွတ်ပြီးထိုးပါ …။
အိမ်ထောင်ရေး – အိမ်ထောင်ဖက်၏ ဂရုစိုက်ခြင်း၊အလိုလိုက်ခြင်း၊ကောင်းကျိုးပြုခြင်းကို ခံရလတ္တံ့။ မိမိ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အိမ်ထောင်ဖက်ထံမှ အကူအညီကောင်း အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်းများရလတ္တံ့။အိမ်ထောင်ဖက်ကို အကြောင်းပြု၍စီးပွားတက်အံ့။ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ရအံ့။
စနေ ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော ပေါင်မုန့်(၅)ချပ်၊ လက်ဖက်ရည်(၁)ခွက်၊ ပန်းအနီ(၆)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ ပန်းအနီ(၆)ပွင့်ထည့်ပြီးရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – သောကြာနေ့ည …။ ဓါတ်ဗူးအစုတ် (သို့) နှီးတောင်းတစ်ခုထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။ နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်ရောင်းကောင်းရန် – အမြန်ရောင်းထွက်ချင်တဲ့ ၊ ရောင်းကောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းများကို ပန်းအဝါ (၅)ပွင့် နဲ့ရိုက်ပေးပါ …။ ပါးစပ်ကနေပြီးတော့လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုတောင်းပါ …။ ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို ဉာဏ်ရှိသလိုလုပ်ပါ …။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၅)နာရီ(၄)မိနစ်တိတိတွင် အနီရောင်ပန်း(၆)ပွင့် ၊ အုန်းသီးပါသောမုန့် (၆)ခု ၊ လက်ဖက်ရည် (၄)ခွက် ၊ သောက်တော်ရေ (၄)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၄) တိုင် ၊ ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိအလိုရှိရာများ ဖြစ်ချင်တာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။ (အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
Tagged ဗဒေငျ ယတွာ